Bangladesh neChina kusimudzira kubatana kweBelt uye Road Initiative
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » Bangladesh neChina kusimudzira kubatana kweBelt uye Road Initiative
Bangladesh Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • China Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Investments • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
China neBangladesh nemusi weChina zvakabvumirana kufambisira mberi kubatana kwavo pa Bhanhire uye Road Initiative.
Kubvumirana kwakasvitswa neChinese Gurukota Li Keqiang uye nekushanyira Gurukota reBangladeshi Sheikh Hasina, uyo ari kushanya zviri pamutemo kuBeijing.
Achidaidza Bangladesh mushandi akakosha wekudyidzana weChina muSouth Asia, Li akarumbidza hushamwari hwenyika mbiri.
"Kubva pakagadzwa hukama hwezvematongerwo enyika, mativi maviri aya agara achinzwisisana nekutsigirana pane nyaya dzinosanganisira zvido zvepakati uye zvinonetsa zvikuru," akadaro Li.
Muna 2016, nyika mbiri idzi dzakatanga kudyidzana kwekudyidzana.
Li akataura kuda kweChina kuchengetedza kushamwaridzana kwepamusoro neBangladesh, kusimbisa kuvimbana, kukurudzira kudyidzana kunobatsira, kusimudzira hushamwari hwevanhu, kuitira kusimudzira hukama hutsva hwehukama.
China neBangladesh nyika dzichiri kusimukira dzine vanhu vazhinji uye nemabasa akakosha ekuvandudza hupfumi nekuvandudza raramo dzevanhu, akadaro Li, achiwedzera kuti kudyidzana kuri pakati penyika mbiri kwave kubereka uye kuri kunakidzwa netarisiro yakakura.
Li akasimbisa kuti China yakamira yakagadzirira kuita nani Belt uye Road Initiative nehurongwa hwekuvandudza kweBangladesh, uye nekukurumidza kudyidzana kunobatsira mune dzakasiyana nzvimbo.
Akaratidzirawo tarisiro yekukurukura nezve mukana wekudzidza pamwe chete pachibvumirano chekutengeserana mahara, kuwedzera kupinzwa kwezvigadzirwa zvemhando yepamusoro zveBanglades zvinosangana nezvinodiwa mumusika weChinese, kusimudzira budiriro yakaenzana yekutengeserana, nekufambisa kudyidzana kwenyika mbiri nekuchinjana kwevashandi.
China icharamba ichipa rubatsiro mukati mekukwanisa kwayo kusimudzira Bangladesh, Li akawedzera.
Vakadaidzira mativi maviri aya kuti vashande pamwechete kuvaka Bangladesh, China, India neMyanmar-Economic Corridor (BCIM EC), nechinangwa chekubatanidza musika unofukidza vanhu vangangosvika mabhiriyoni matatu, kusimudzira budiriro yakajairika, kubatsirana zvirinani, uye moona kubatsirana.
Nyika mbiri idzi dzinofanirwa kusimbisa kutaurirana nekubatana mune zvepasirese uye zvematunhu zviitiko uye vatambe chinzvimbo chakanaka murunyararo, kugadzikana nekusimudzira, akadaro mutungamiri weChina.
Hasina akataura makorokoto ake pagore rechimakumi manomwe rekuvambwa kwePeople's Republic of China, ndokuti hukama hweBangladesh neChina huri padanho repamusoro.
Mativi ese ari maviri anozvipira kurunyararo, kugadzikana, kubatsirana, uye kugadzirisa gakava nenzira dzerunyararo, akadaro Hasina, achiwedzera kuti Bangladesh ichapemberera makore makumi mana nemashanu kubva pakagadzwa kudyidzana neChina gore rinouya.
Vati Bangladesh iri kusimudzira chinangwa che "Sonar Bangla" parizvino, ichidzokorora kuti nyika yavo iri kuda kutora chikamu mukuvaka pamwe kweBelt neMugwagwa, kumhanyisa kuvaka kweCBIM EC, kudzvanya pamberi pekubatana kwedunhu, kusimbisa kubatana. pane zvekutengeserana, zvekudyara, zvebasa nezvivakwa, kuitira kuti pamwe vagamuchire ramangwana rakatonaka.
Tisati tataura, Li akaita mutambo wekugamuchira Hasina. Mushure mehurukuro, vakaona kusainwa kwezvibvumirano zvekudyidzana pakati pezvekudyara, tsika nemagariro, kushanya pamwe nekuchengetedza mvura.